कृष्णले विद्वानहरुलाई छोडेर अर्जुनलाई नै किन दिनुभयो श्रीमद्भगवद् गीत ज्ञान ?
उसो भए यो ज्ञान लुप्त कसरी भयो ? भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई किन यस्तो भन्नुहुन्छ कि यो ज्ञान लुप्तप्राय भएको छ ?
लुप्तको अर्थ हुन्छ कि भगवद् गीताको तात्पर्य(सार) लुप्त भएको थियो । यद्दपी विद्वानहरुले आफ्ना आफ्ना मान्यता अनुसार गीताको व्याख्या प्रस्तुत गरिरहेका थिए तर यो व्याख्या भगवद गीता हुन सकेन ।